गृह मन्त्रालयका सह- सचिवको गाडीलाई कारवाही गरेका ट्राफिक प्रहरी सम्मानित ! » लोक संगीत पारखी
गृह मन्त्रालयका सह- सचिवको गाडीलाई कारवाही गरेका ट्राफिक प्रहरी सम्मानित !
१३ असार २०७६, शुक्रबार ०६:२२
काठमान्डौ , गृह मन्त्रालयका सह- सचिव रामकृष्ण सुवेदीको गाडी माथि कारवाही गरेका ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमै सम्मान गरिएको छ । अनाधिकृत रुपमा सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि पार्किङ गरेर गाडी राखिएको बेला महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट खटिएका प्रहरी जवानले गाडीमा लक लगाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदी पार्किङ गर्न निषेध गरिएको स्थानमा बा २ झ ४३८८ नम्बरको सरकारी गाडी राखेर खाना खान गएका थिए । सोही समय प्रहरीले उनको गाडीमा लक लगाएको थियो ।
उनै ट्राफिक प्रहरीलाई युवाहरुले सडकमै सम्मान गरेका हुन् । प्रवक्तालाई नै कारवाही गरेर चर्चामा आएका ट्राफिक प्रहरीलाई युवाहरुले सडकमै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन् । ह्वील लक गरेपछि चर्को दबाबमा केही समयमै अनलक गरेका थिए । तर उनले एक हजार रुपैयाँको चिट भने काटेका थिए । गाडी लक गरिएपछि प्रहरीलाई धम्काएर गाडी फिर्ता लान खोजेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले गाडी लक गरेको थाहा पाएपछि आफ्ना चालकसहित गाडी भएको स्थानमा आएर ट्राफिकलाई ‘म गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँ’ भन्दै चिट नकाट्न अनुरोध गरेका थिए । तर उनले गाडी लक गर्नुका साथै एक हजार को चिट काटेका थिए ।
नेपाली चेली प्रतिष्ठा राउत मिस इङ्ल्याण्डको फाइनलमा, जिताउन जुटे बेलायतबासी,सक्दो शेयर गरौं
कप्तान पारसको अर्धशतक, नेपालद्वारा मलेसिया सात विकेटले पराजित
धनगढीका विद्यार्थीहरुलाई एभरेष्ट बैंकको सहयोग ,
करेन्ट लागेर दुबै हात र खुट्टा गुमायका कृष्ण ओलि भेट्न सहयोग लियर भाइरल मुना मगर र लाउरे पुगे ( भिडि...
बिहे गरेर घर जाँदै गर्दा चलिरहेको गाडीबाट बेहुली बेपत्ता, यस्तो घटना कल्पनै गर्न नसकिने"
चौतर्फी विरोध भएपछि आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार